फेरिदैँ देशको मुहार, मेयर देखि मुख्यमन्त्री सम्म गए स्कुल पढाउन - Nayapul Online
तुलसीपुर । उपमहागनरपालिका–७ स्थित माध्यामिक विद्यालय कालाखोलामा कक्षा १० मा अध्यनरत विद्यार्थीहरले एकोहोरो सुनिरहेका थिए ।
टिचफर नेपाल र तुलसीपुर उपमहागनरपालिकाको अयोजनामा विद्यालयमा एक दिन भन्ने योजना अुनसार ५ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले कक्षा कोठामा पढाउन जानुभएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सोमबार कक्षा १० ए सेक्सनका विद्यार्थीलाई पढाउने पालो मुख्यमन्त्री पोख्रेलको थियो । पढ्दा सबै भन्दा सजीलो विषय भन्दा पनि अपठेरो विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोख्रेलको समय ९० मिनेटको थियो । त्यसैले उनले विद्यार्थीमाझ निरन्तर रुपमा पढ्ने र बुझने तरिकाका बारेमा आफना धारना प्रस्तुत गरिरहेका थिए । अत्यन्तै उत्सुकता र रुचीपूर्ण तवरले सुनिरहेका विद्यार्थीले घरी मुख्यमन्त्रीका कुरा सुन्थे त घरी उनिसंगै पछिपछि गएका सुरक्षाकर्मी र फोटो खिच्दै गरेका पत्रकारहरु तर्फ पनि नजर लगाउँथे । नबोलेर भन्दा बोलेर पढेको सिकाइ बढी हुने भन्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले पढ्दै र लेख्दै गर्दा झनै स्मरण क्षमेतामा वृद्धि हुने बताए ।
उता संगै जोडिएको कक्षा १० का बि सेक्सनका विद्यार्थीलार्ई तुलसीपुर उपमहागनरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले पढाइ रहेका थिए । ‘सफल हुने मान्छेले सकारात्मक सोच्नुपर्छ । असल व्यवहार, असल विचार र असल विहार गर्ने मान्छे जिवनमा कहिल्यै दुःख पाउँदैन ।’ नगर प्रमुख पाण्डेले भने । वा–आमा, गुरु सबैलाई सम्मान गर्नु पर्ने बताउदै उनले केटाले केटीलाई, केटीले केटालाई हेला गर्नु नहुने बताए । त्यसैगरी प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वलीले पनि कक्षा आठका विद्यार्थीलाई पढाए । ‘ नियमति शिक्षकले पढाउँदा भन्दा परक शिक्षकको रुपमा प्रवेश गरेका सांसद वलीले पढाउँदा विद्यार्थीले निकै ध्यान पूर्वक सुनेका थिए । ‘जबरजस्ती र करकाप भन्दा स्वइच्छाले लिएको शिक्षा बढि प्रभाकाकारी हुन्छ,’ सांसद वलीले भने , ‘ दबाबमुल्क शिक्षाले मान्छेलाई सफलताको बाटोमा पु¥याउँदैन ।’
के भन्छन शिक्षक ?
स्थानीय तह देखि प्रदेश सरकार सम्मको सहभागिताले निकै उत्साहित बनाएको शिक्षकहरुले प्रतिकृया दिएका छन् । मेयर देखि मुख्यमन्त्री सम्मको आगमनले पछिल्लो समय समुदाय र विद्यालय विच बढ्दै गएको दुरीलाई घटाएको भन्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजीव ओझाले सकारात्मक सन्देश गएको बताए । सरकारी विद्यालयमा पढेर आफनो क्षेत्रमा सफल भएका व्यक्तिहरु स्कुलमा आएर आफना विगतका अनुभव सहित शिक्षण गराउँदा नजिकीदै गरेको एसइई परिक्षामा समेत ठुलो सफला मिल्ने प्रधानाध्यापक ओझाले अपेक्षा व्यक्त गरे ।
यसैविच तुलसीपुर उपमहागनरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य महाशाखाले कालाखोला माध्यामिक विद्यालयमा ९ सय ६० थान सेनेटरी प्याड वितरण गरेको थियो । महिनावारी हुँदा कक्षा छोड्ने दरलाइ रोक्न र प्याड प्रयोग नगरी घरेलु कपडा प्रयोग गर्दा इन्फेक्सनका कारण स्वास्थ्यमा पुग्ने असरबाट जोगाीन विद्यालयमा प्याड वितरण गरिएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख गोकर्ण दहालले बताए ।